मुलुक Archives - Page 31 of 50 - Myagdi Online
माघे संक्रान्ति पर्वको अबसरमा छन्त्याल समाज पोखरामा भलिबल प्रतियोगिता सुरु ( भिडियो सहित )
पोखरा, २ माघ । माघे संक्रान्ति पर्वको अवसरमा सोमबार देखि पोखराको नदीपुर स्थित छन्त्याल समाज घरमा अन्तर क्लव स्तरिय महिला ÷ पुरुष भलिवल प्रतियोगिता सुरु भएको छ । सोमबार भएको उद्घाटन खेलमा म्याग्दीको मण्डली युवा क्लवले आयोजक छन्त्याल युवा संघको बी समुहलाई २–० को सोझो सेटमा पराजित गरेको हो ।... पुरा पढ्नुहोस
रौतहट । रौतहटको कटहरिया नगरपालिका वडा नम्वर १ हर्षाहा टोलका ५५ बर्षीय बैधनाथ साह कलवारको ‘ब्रेन हेम्रेज’ बाट ज्यान गएको छ । भारत बिहार घोडा शहनस्थित आफन्तको घरबाट बिहानै फर्किने क्रममा शीतलहरबाट प्रभावित कलवार उच्च रक्तचाप भएपछि अचेत भएर लडेका थिए । सडकमै लडेका उनको शिवनगरस्थित उपचारको क्रममा मंगलबार राति... पुरा पढ्नुहोस
अध्यक्ष प्रचण्ड र महामन्त्री सिंहबीच भेटवार्ता
ललितपुर - नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनबिक्रम सिंहबीच भेट भएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न महामन्त्री सिंह बिहीबार बिहान ७ः३० बजे प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका थिए । सो क्रममा बाम गठबन्धनलाई कायमै राखेर अगाडि बढ्नेबारे कुराकानी भएको थियो । भेटमा नेता सिंहले बामपन्थीहरु मिलेर... पुरा पढ्नुहोस
काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले आगामी माघ २४ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले आज सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार आगामी माघ २४ गते मतदान हुनेछ । उच्च अदालत रहेका स्थानहरुमा विहान १० वजेदेखि ३ बजेसम्म मतदानको समय तोकिएको छ । जसमा आयोगबाट प्रदेशगत रूपमा मतदाता नामावली... पुरा पढ्नुहोस
तारेखमा छुटे डा. गोविन्द केसी,
पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतलाई अदालतको मानहानी मुद्दामा पक्राउ परेका डा. गोविन्द केसीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले डा. केसीलाई तारेखमा राखी अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीको जिम्मामा छाड्न आदेश दिएको हो । आदेश लगतै डा. केसी प्रहरी हिरासतबाट रिहा भएका... पुरा पढ्नुहोस
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको मानहानीको आरोपमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट पक्राउ परेका प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द केसीलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारको हिरासतमा राखिएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख प्रमख रवीन्द्र धानुकले उनलाई सिंहदरबार हिरासतमा राखिने जानकारी दिए । केसीलाई बा १ झ ७२६६ नम्बरको प्रहरी अस्पतालको एम्बुलेन्समा राखेर सिंहदरबार पुर्याइएको... पुरा पढ्नुहोस
डा. गोविन्द केसीलाई पक्राउ गर्न सर्वोच्चद्धारा पक्राउ पूर्जी जारी
२४ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दामा प्रा. डा. गोविन्द केसीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ । न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले डा. केसीलाई भोलि विहान ९ बजे उपस्थित गराउन प्रहरीलाई भनेको छ । डा. केसीको नाममा जारी भएको विज्ञप्ति र समाचारहरु हेर्दा अदालतको फैसलाविरुद्ध जनमानसमाभैम पर्ने गरी न्याय व्यवस्था,... पुरा पढ्नुहोस
लमजुङ — हिमाली जिल्ला मनाङमा अत्याधिक चिसोका कारण ठाडो खोलाका पानी जम्न थालेको छ । बगेको पानी चट्टान जस्तै साह्रो बनेको छ । मनाङको चामेमाथिका ठाडोखालामा बग्दै गरेको पानी जमेको स्थानीयले बताए । मर्स्याङ्दी नदीको छेउछाउ पनि जमेको स्थानीयले बताएका छन् । चामेकी खरिमाया गुरुङका अनुसार पिउनको लागि हिउँ पगाल्नु परेको छ। पाइपभित्र पानी... पुरा पढ्नुहोस
डा. गोविन्द केसी फेरि अनशनमा, प्रधानन्यायाधीशको किन मागे राजीनामा ?
काठमाडाैं, २४ पुस- चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीनलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरेपछि प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी आन्दोलित बनेका छन् । सर्वोच्चले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बर्खास्त गरेका डीन डा शशि शर्मालाई पुनर्बहाली गर्ने आदेश दिएको थियो । [caption id="attachment_13724" align="alignnone" width="750"] Dr. Govinda KC Photo: THT File[/caption] ओदेशलगत्तै केसीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर पुन... पुरा पढ्नुहोस
जमिनबाट निस्किन थाल्यो धुँवा, स्थानीयलाई अनिस्ट हुने चिन्ता
लमजुङ, २४ पुस– लमजुङको सुन्दरबजारमा बस्ती नजिकै जमिनबाट धुवाँ निस्किएपछि स्थानीयवासी त्रस्त भएका छन् । सुन्दरबजार नगरपालिका–९ सिउडीबारको बस्ती नजिकै बाँझो जमिनबाट धुवाँको मुस्लो निस्किएको हो । स्थानीयवासी सुनिता खनालको घर पछाडिको भिरालो जमिनबाट धुवाँ निस्कन थालेपछि प्रकोपको डरले स्थानीयवासी त्रस्त भएका हुन् । गत मंगलबारबाट सामान्य धुवाँ निस्किएको देखिएको थियो ।... पुरा पढ्नुहोस